Mpiaro sy mpamokatra Butt Lifter Shapewear - China Butt Lifter Shapewear Mpanamboatra
Lantelina tsy misy marika amboaram-baventy marika, feno hip-bo, voa andoha. Dantelina kely, feno hatsaram-behivavy, tsara tarehy sy tsy milamina. Azo antoka kokoa ny fitaovan'ny tranobe roa. Solony vita amin'ny elastika, tery ary tery. Maivana ny rivotra sy ny fofonaina.
Fivarotana mivantana ny varotra Vaovao vokatra vaovao tsara tarehy vehivavy miboridan'ny tazomoka mitondra pataloha ambany
Ity vokatra ity dia gadona 95% + spandex 5%. Ny lamba dia malefaka sy mifoka rivotra, ary akaikin'ny hoditra. Ny valahany avo dia manenjana ny kibo, mampihena tavy, manala maizina. Ny hatsembohana porofo sy ny hatsembohana lena dia manasarotra ny fitetezana azy.
Fivarotam-bidy tsara indrindra miampy ny habeon'ny vehivavy ambony waistraikimailista Tummy Control Seamless Sexy Body Shapers Butt Lifter
Lantelina tsy misy marika amboaram-baventy marika, feno hip-bo, voa andoha. Lanton'ny efijery lamba, feno tovovavy mahafatifaty, tsara tarehy ary tsy misy bika. Solony vita amin'ny elastika, tery ary tery. Teknolojia fananganana tokana, maivana ary tsy misy marika sy mangatsiaka ny lamba.